warkii.com » Kangana Ranaut”Maxay tahay sababta ilaa hada Mahesh Bhatt booliska saldhiga u keeni waayen” Atiriishadan oo aaminsan in Mahesh dilay Sushant!!
Kangana Ranaut”Maxay tahay sababta ilaa hada Mahesh Bhatt booliska saldhiga u keeni waayen” Atiriishadan oo aaminsan in Mahesh dilay Sushant!!
Kangana Ranaut ayaa ka dhawaajisay inee waajib tahay in saldhiga booliska la geeyo Ragg uu kamid yahay Filimsameye Mahesh Bhatt waayo waxay aaminsantahay geerida Sushant inuu ku lug leeyahay iyo dilkiisa xili ay wareysi bixineysay waliba wareysigii jimcihii ayee arinkaan ka dhawaajisay xidigtaan.
Ranaut marka ay Mahesh ka hadleysay misane Karan kusoo dartay arinka waxay tiri,”waxaan wali fahmi la’ahay sababta Mahesh Bhatt booliska suaalo oga weydiin waayeen kiiska Sushant misane saldhiga u geyn waayeen isaga kaligiis ma ahan xitaa Karan Johar ayee waajib ahed in wax laga weydiiyo arinkan.”
“Booliska aniga xitaa wey ila soo xiriiren si ay suaalo ii weydiyaan balse waxaan u sheegay inaan Manali joogo oo aan Mumbai joogin sidaa aawged qof iiso dira ayaan dhahay si suaalihiina aan oga jawaabo ilaa hadana wax jawaab ah kama haayo ma garan qaabkee wax usocdaan.”
“Kiiska Sushant waa waajib in booliska suaalo ka weydiiyaan Karan Johar, Mahesh Bhatt iyo Aditya Chopra waayo seddexdooda ayaa ugu weyn dadka lagu eedeyo geerida Sushant Singh” sidaas ayee hadalkeeda kusoo gaba gabeysay Aditya waa la wareestay balse labada kale wali looma wicin.